यी अभिनेताले खोसे जीवनको चर्चा, हरियो कार्डको चक्कर कहिले सम्म ? « Mazzako Online
यी अभिनेताले खोसे जीवनको चर्चा, हरियो कार्डको चक्कर कहिले सम्म ?
नेपाली फिल्मका चकलेटी एवं चर्चित अभिनेता हुन् जीवन लुइटेल । तर, उनलाई अचेल नेपालमा कमै मात्र भेटिने गरिन्छ । कारण, उनी नेपाल भन्दा अमेरिकाको चक्कर बढी लगाइरहेका छन् । जीवन अमेरिकामा बस्न थालेपछि नेपालमा केही अभिनेतालाई भ्याई नभ्याई भयो । कारण, बर्षमा जीवनले गर्ने आधा दर्जन फिल्म पनि उनीहरुकै भागमा आयो ।
अभिनेता आर्यन सिग्देल र जीवन लुइटेल समकक्षी र चकलेटी शैलीका कलाकार हुन् । यसैले, आर्यन जीवन अमेरिका गएकाले आफूलाई फिल्मको चाप बढी भएको बताउँछन् । जीवनका कारणले गर्दा आर्यन व्यस्त भएपनि यसले लुइटेललाई खासै फरक पारेन । तर, केही महिनाकै अन्तरालमा आधा बर्ष अमेरिकातर्फ नै हराउन थालेपछि नेपालमा भने उनले पाइरहेको चर्चा अरु अभिनेताले खोसेका छन् ।
यसमा सबैभन्दा अगाडि अनमोल केसी आउँछन् । अभिनेता अनमोल पनि चकलेटी फेस भएका कलाकार हुन् । अहिले बजारमा उनको चर्चा सर्वाधिक धेरै छ, कुनै बेला जीवनले यस्तै चर्चा पाएका थिए । फिल्म ‘प्रेमगीत’बाट उदाएका अभिनेता प्रदिप खड्का पनि चर्चामा आए ।
यी बाहेक सविन श्रेष्ठले पनि थुप्रै फिल्म पाइरहेका छन् । केही दिन हराउ“दा नै विरानो हुने फिल्म नगरिमा आधा बर्ष भन्दा बढी हराएपछि अरुले चर्चा खोस्नु अनौठो होइन । यसैले, अब नेपालमै बसेर पुरानो चर्चा बटुल्ने कि हरियो कार्डको चक्करमा लाग्ने जीवन जी ?